သတင်း – Medical Sharing
April 4, 2020 Dr Mrs Mg
ရန်ကုန်မှာ သကြင်္န်ပိတ်ရက်တွေ အပြင်လုံးဝမထွက်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရညွှန်ကြားချက်ထုတ် သွားရမယ့် ကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ ‌အစားအသောက်ဝယ်တာကလွဲရင် အပြင်လုံးဝ မထွက်ဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကို မြို့နယ်အားလုံးကိုပေးပို့ထားတာပါလို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေးက ‌ပြောပါတယ်။ မဖြစ်မနေကိစ္စတွေကလွဲပြီး ‌နေအိမ်မှာသာ ‌နေထိုင်ဖို့ အသွားအလာကန့်သတ်တာကို ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်အောင် ကြပ်မတ်ဖို့လည်း Read more
April 4, 2020 April 4, 2020 Dr Mrs Mg
မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ထောင်ဒဏ် ၆ လနှင့်ဒဏ်ငွေ ၁၀ သိန်း ချမှတ်ခံရ – ဧပြီ ၄ရက် လူစုလူဝေးဖြစ်စေမည့် မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသားကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြင့် တမူးမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၆လနှင့် လဝကဥပဒေအရ Read more
April 3, 2020 Dr Mrs Mg
ဝန်ကြီးများရုံးရှေ့-အနော်ရထာ လမ်းထိပ် ကားတိုက်မှု့ ဖြစ်ပွား မျက်စိ ရှေ့ လေးတင်..၄ ပတ် လိမ့်သွားခြင်း..စိန်ပေါ…. ကားဂိတ် နဲ့ ဝန်ကြီးများရုံး ဒေါင့်……. မီးပွုင့်တည့်တည့်… .ဒဏ်ရာ တဦး ပဲ ရရှိ.. ပတ်ဝန်း ကျင်မှ လူ Read more
ထိုင်းမှ မြန်မာပြည် ပြန်လာသည့် ပြည်သူများသိစေရန် (အရေးပေါ်သတင်း)
ထိုင်းမှ မြန်မာပြည် ပြန်လာသည့် ပြည်သူများသိစေရန် (အရေးပေါ်သတင်း) မြဝတီနယ်စပ်ရှိ နယ်ခြားစောင့် BGF တပ်ဖွဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိကြသော နယ်စပ်ဝင်ပေါက် လှေဂိတ်အားလုံးအား ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ပါပြီး။လောလောဆယ်တော့ အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်က တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပေါ်မှတော့ ဖြတ်ကူးလို့ ရပါသေးတယ်။ ဘေးဝင်ပေါက်လို့ခေါ်တဲ့ Read more
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြည့်လူနာ ၃ ဦးထပ်မံ သေဆုံး – By DVB 19 March 2020 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြည့်လူနာတွေထဲက လူနာ ၃ ဦးထပ်မံ သေဆုံးသွားတယ်လို့ Read more
Wohan မြို့ ဆေးရုံတွင် ဝူဟန် ဗိုက်ရပ် ထိထားသော လူနာတစ်ယောက်အခြေအနေ….
တရုတ်နိုင်ငံ Wohan မြို့ ဆေးရုံတွင် ဝူဟန် ဗိုက်ရပ် ထိထားသော လူနာတစ်ယောက်အခြေအနေ…. A patient with Corona Virus in Hospital at Wuhan, China Viewer discretion advised Read more
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် စပိတ်တော့မည်
March 18, 2020 March 19, 2020 Dr Mrs Mg
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် စပိတ်တော့မည်ဟု ကြော်ငြာ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ပွဲတော်အားလုံးအား (21.3.2020)ရက်နေ့မှစတင်၍ ပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်းကား အတက်ကားများ ပြေးဆွဲတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားဈေးဆိုင်တန်းများလည်း ပိတ်သိမ်းပါမည်။ ချွင်းချက်တခုအနေနဲ့ အချို့ဘုရားဖူးလိုသူများ အဓိဌာန်ဝင်လိုသူများ အနေနဲ့ Read more
ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်ရောဂါသည် တစ်ဦး ကွယ်လွန်မှုအပေါ်သူရဲ​အသုဘ)မြင်ကွင်း
March 18, 2020 Dr Mrs Mg
ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်ရောဂါသည် တစ်ဦး ကွယ်လွန်မှုအပေါ်သူရဲ​အသုဘ)မြင်ကွင်း လူသူမရှိ ၊ လုပ်ပေးမယ့်သူမရှိ အလွန်ကြောက်စရာမြင်ကွင်းတခုပါပဲ / ဒီကဒ်ရောဂါဆိုးကြီးမှလူသားအာလုံးအား ကင်ဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် လူသူမရှိ ၊ လုပ်ပေးမယ့်သူမရှိ အလွန်ကြောက်စရာမြင်ကွင်းတခုပါပဲ / ဒီကဒ်ရောဂါဆိုးကြီးမှလူသားအာလုံးအား ကင်ဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အေ သွေးပိုင်ရှင်များသည် ခုခံအား နဲသောကြောင့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု့ ပိုများဟု တရုတ်ပညာရှင်များဆို
March 18, 2020 March 18, 2020 Dr Mrs Mg
အေ သွေးပိုင်ရှင်များသည် ခုခံအား နဲသောကြောင့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု့ ပိုများဟု တရုတ်ပညာရှင်များဆို အေသွေးပိုင်ရှင်များသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရာတွင် ခုခံအား ပိုနည်းကြပြီး အိုသွေးပိုင်ရှင်များမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ပို၍ ခုံခံနိုင်စွမ်း များသည်ဟု Covid-19 အဖြစ် Read more
နေပြည်တော်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဝင်းပိုင် ဂိုဒေါင်မီးလောင်
နေပြည်တော်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဝင်းပိုင် ဂိုဒေါင်မီးလောင် ၁၈.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊(၀၆ ၁၇)အချိန်ခန့်၊ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏမြို့နယ်၊ သစ္စာလမ်းရှိ ACE ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းရိ ဂိုဒေါင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် Level2ယာဉ်အုပ်စုများထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၈.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊(၀၆ ၁၇)အချိန်ခန့်၊ Read more